Vietnam emepegharịrị agwaetiti Phu Quoc maka ndị njem nlegharị anya si mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Vietnam » Vietnam emepegharịrị agwaetiti Phu Quoc maka ndị njem nlegharị anya si mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Vietnam emepegharịrị agwaetiti Phu Quoc maka ndị njem nlegharị anya si mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi.
Ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọrụ agwaetiti ahụ yana 99% nke ndị okenye Phu Quoc agbaala ọgwụ mgbochi megide nje COVID-19.
Vietnam ezumike agwaetiti nke Phu Quoc nabatara ihe karịrị ndị njem nlegharị anya 200 zuru ezu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa sitere na South Korea taa.
Ndị ọbịa South Korea bụ ndị njem mba ofesi mbụ na Vietnam ebe obodo ahụ mechiri ókèala ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ gara aga iji kwụsị mgbasa nke ọrịa coronavirus.
Vietnam mechiri oke ya na Machị nke afọ 2020, obere oge ka ekwenyechara ikpe mbụ COVID-19 kọrọ.
Kemgbe ahụ, Vietnam kwere naanị ọtụtụ ụgbọ elu mba ụwa n'otu izu ya na ndị ọkachamara si mba ofesi, ndị nnọchi anya mba Vietnam na-alọta.
Ndị mbata ahụ si mba ofesi ga-enwerịrị ikewapụ ụbọchị iri na anọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị a họpụtara ahọpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-arụ.
Taa, a nwalere ndị njem nlegharị anya South Korea ịgba ọgwụ mgbochi maka COVID-19 mgbe ha bịarutere, ma ozugbo eweghachitere nsonaazụ na-adịghị mma, ha nwere ike ịnụ ụtọ ihe omume ndị njem nlegharị anya n'agwaetiti ahụ na-enweghị mgbochi ụbọchị iri na anọ.
Ndị ọbịa South Korea ga-enwe ike ịnụ ụtọ nlegharị anya, ịzụ ahịa na ihe omume ntụrụndụ nke chọrọ asambodo ọgwụ mgbochi.
Dabere na Ministri Ahụike Vietnam, ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ na akụrụngwa ọrụ agwaetiti yana 99% nke Phu QuocNdị toro eto agbaala ọgwụ mgbochi ọrịa megide nje COVID-19.
Agwaetiti a na-emekwa atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi ụmụaka gbara afọ 12 ruo 17 n'ọnwa na-abịa.
Vietnam bụ obodo kachasị ọhụrụ na Eshia sonyere Thailand, Indonesia na Malaysia n'imepegharị ókèala ha maka ndị ọbịa si mba ọzọ gbagoro ọgwụ mgbochi.
Thailand bụ onye mbụ malitere ikwe ka ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa si mba ọzọ gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke na agwaetiti Phuket tupu ịgbasa na mpaghara ndị ọzọ, gụnyere Bangkok, malite na Nọvemba 1.
Agwaetiti ndị njem nlegharị anya Indonesian nke Bali meghere ndị bịarutere n'ọnwa gara aga yana ụfọdụ mmachi gụnyere nnwale na ichepụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụbọchị ise.
Malaysia mepere agwaetiti Langkawi n'okpuru mmemme pilot 'COVID-19 afụ'.